करोडपति चलाएर अर्बपति बन्दै अमिताभ, यस्तो छ उनको कमाई - Everest Dainik - News from Nepal
करोडपति चलाएर अर्बपति बन्दै अमिताभ, यस्तो छ उनको कमाई
२०७६, १ आश्विन बुधबार
काठमाडौं, भारतका चर्चित र प्रख्यात कलाकार हुन अमिताभ बच्चन । अभिनयदेखि सामाजिक जीवनमा समेत उनको जस्तो निरन्तरता अन्य कुनै पनि कलाकारको छैन ।
कतिपय कलाकार जीवनको एउटा उत्कर्षमा चर्चामा आउँछन् र समयक्रमसँगै बिलाउँछन् । तर अमिताभ बच्चन भने जीवनको सत्तरी दशकसम्म निरन्तर कलाक्षेत्रमा नै छन् ।
अहिले पनि चलचित्रमा अभिनयदेखि टेलिभिजनका पर्दामा समेत अमिताभ सक्रिय छन् ।
सानो पर्दामा अमिताभको सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हो– कौन बनेगा करोडपति । यो कार्यक्रममार्फत उनले कैयन्लाई करोडपति समेत बनाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस कोरोना पुष्टिपछि अमिताभ बच्चनले गरे यस्तो अपील, के छ अवस्था ?
तर अरुलाई करोडपति बनाउने अमिताभ आफू भने कति कमाउँछन् त ?
सुन्दा अचम्म लाग्ला,सोनी टिभीमा प्रसारित हुने कौन बनेगा करोडपतिको एउटा एपिसोडको ३ देखि ५ करोडसम्म लिने गरेका छन् । अमिताभ आफैले यस विषयमा कुनै कुरा खुलासा नगरेपनि केही सार्वजनिक भएका रिपोर्टमा उनले २०१८ मा कौन बनेगा करोडपतिका लागि सोनीसँग २ सय करोडको सम्झौता गरेका थिए । गत वर्ष केबिसीका ७५ वटा एपिसोड भएका थिए । अन्तिम कार्यक्रममा उनी निकै भावुक भएका थिए । गत वर्ष उनले एक एपिसोडको २ करोड ६० लाख रुपैयाँ लिएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस यस्तो ट्वीटले 'फसे' अमिताभ, घरबाहिर हुँदैछ प्रदर्शन
यो वर्ष भने उनको पारिश्रमिक ३ देखि ५ करोडको बीचमा हुनसक्ने कतिपयले बताएका छन् ।
अमिताभले कार्यक्रममार्फत सामाजिक सन्देश समेत दिने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा बिहारका सनोजले १ करोड रुपैयाँ जितेका थिए ।
ट्याग्स: amitabh bachhan, Kaun Banega Karodpati, अमिताभ बच्चन